Swaziland inogadzirira Reed Dance ya2017
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Swaziland inogadzirira Reed Dance ya2017
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Eswatini Breaking News • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Humambo hweSwaziland mutambo wakakura kwazvo wetsika, unozivikanwa seMhlanga kana Reed Dance, wakagadzirirwa kuitika kubva musi wa29 Nyamavhuvhu nezuva guru (Zuva rechinomwe) rakafanira kuitwa musi wa7 Gunyana. Vakazadzwa nenziyo nekutamba, uye vakapindwa naMambo, iro zuva guru rinovawo zororo revanhu muSwaziland, rinokwevera mapoka kubva kunzvimbo dziri kure nekure kuzopemberera nekugovana mumafaro ese
Netsika dzakafambidzana mazana emakore kumashure, mutambo weRed Dance chishamiso chinoshamisa. Panguva yemhemberero iyi vakadzi veumambo vasina kuroora uye vasina vana vanounza tsanga dzavo dzichangochekwa kuna Mambokadzi Amai kuchengetedza kwaanogara. Nguva nenguva, Mambo vanoshandisa chiitiko ichi kuratidzira pachena murume anenge achizoroora kana kuti Liphovela.
Kana zuva guru rasvika, vakadzi vadiki vanobva kumatunhu ese eSwaziland nekune dzimwe nyika vanoungana pamuzinda weLudzidzini pachiitiko ichi chakakosha. Mhandara dzinoungana mumapoka uye dzinobuda dzichitevedza mahombekombe erwizi kunocheka nekuunganidza tsanga refu, dzinozvisunga dzodzokera kuLudzidzini, Royal Homestead muLobamba. Makumi ezviuru zvevasikana, vanotungamirwa nemadzimambo eSwazil, vanopa gungwa rerudzi pavanenge vachitamba nekuimba, vachidada vakatakura tsanga dzakatemwa.
Vagari vemuHumambo hwemakomo ava vanonyanya kuda nyika nezvetsika yavo uye kutora chikamu mumutambo uyu inguva yekuzvitutumadza neropafadzo kumhuri yese.
Chinonyanya kukosha pachiitiko ichi mhemberero yekupa rutsanga - chimwe chezvinhu zvakakura zvemuAfrica zvine mutsigo. Vasikana vanoungana kuLudzidzini vakapfeka zvipfeko zvechivanhu; masiketi mapfupi akavezwa ane machira ane mavara ane mabhanhire achitamba, achiimba uye achipemberera kubatana kwevakadzi vehumambo. Mambo Wake Mswati vachabatana nemhemberero idzi kupa rukudzo kuvasikana.
Pakupera kwezuva, kana vasikana vese vauya netsanga yavo yakatemwa, kuvakwazve kweGuma inodzivirira (fenzi yerutsanga) kutenderedza imba yaMambokadzi Amai kunogona kutanga.
Umhlanga Mutambo unosunga nyika diki iyi asi yakanyatsoumbwa pamwechete. Kuzivikanwa kwayo kuri kuramba kuchiwedzera kunoratidza kuderera kuri pachena kwetsika dzechivanhu kumwe kunhu muAfrica.
Kupupurira uyu mutambo chiitiko chaicho chakasiyana cheSwaziland musanganiswa wetsika dzekare, pristine renje, gore rakatenderedza mhuka dzesango uye mweya wekunakidzwa!